Ny fizotry ny famoronana amin'ny famoronana sary famantarana vaovao ho an'ny Guinness | Famoronana an-tserasera
Famolavolana ny sary famantarana avy amin'ny marika ekena tsy maintsy mandalo tanan'ireo studio malaza indrindra ary malaza. Ary marika labiera mihoatra ny iray toy ny Guinness, iray amin'ireo malaza eran-tany.
Labiera amidy any amin'ny firenena maherin'ny 150 miaraka amin'ny labiera 10 tapitrisa lanina isan'andro manerantany. Tsy ho ela i Guinnes dia hampiditra sary famantarana nohavaozina noforonin'i Design Bridge, studio any London.
Mitondra a fakana vaovao ny mari-pamantarana Guiness azo ekena, Design Bridge dia nampiasa modely noforonina ho azy sy fanesoana skecthes isan-karazany namboarina tamin'ny alàlan'ny fitarihan'ny mpanamboatra harpa sasany, Niebisch & Treee.
Io fizotry ny fiaraha-miasa io dia namela ny ekipa asitrika ao anaty endrika sy tsipika harpa, manomboka amin'ny tsipika mampiavaka ny vozony mirindra mankany amin'ny alàlan'ny alàlan'ny aloka amin'ny zavamaneno, hiantohana ny endrikao sy ny fahatsapanao tena marina araka izay azo atao.
Vantany vao vita ny sarisaritan'i Design Bridge, dia nentiko tany amin'i Gerry Barney, izay manana ny maha izy azy azy ireo namolavola ny sary famantarana ny British Rail tamin'ny 1965. Nosoratany ilay kinova iray loko misy ny sary hita eto ambany.
Nandalo ihany tamin'ny farany hiara-hiasa amin'ny New North Press hamerina ny sary famantarana amin'ny teknikan'ny fanontana isan-karazany mba hahitana ilay mety indrindra aminao amin'ny famokarana loko sy izay mety ho fanontana nomerika amin'ny valiha farany.
Mifangaro ao ny valiny endrika tsy ampoizina izay manohitra ny alokaloka mahazatra na koa ny fandikana 3D an'ny logo sasany.
Ny sary famantarana farany dia nahagaga sy nahagaga. Sorohy ny fironana minimalista tena amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Ny pitsopitsony dia tsikaritra kokoa miaraka amin'ny sary famantarana amin'ny habe lehibe kokoa.
Design Bridge dia nanambara fa afaka miasa tanteraka ny logo vaovao ho an'ny labiera birao sasany any Eropa amin'ny fanontana voafetra any Afrika. Fampisehoana faran'izay tsara ho an'ireo mankasitraka Guinness tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny sary famantarana vaovao ho an'ny labiera Guinness avy amin'i Design Bridge